Ọcha ọcha na akpụkpọ ahụ nwere ike ghara ịdị njọ ma ọ bụ ọbụna dị ize ndụ. – Noor Health Life
Ọcha ọcha na akpụkpọ ahụ nwere ike ghara ịdị njọ ma ọ bụ ọbụna dị ize ndụ.
N’oge ndụ dị iche iche, akpụkpọ ahụ anyị, karịsịa akpụkpọ ihu, na-enwe ọtụtụ mgbanwe, n’ihi ya mgbe ụfọdụ ntu, pimples na-akpata ahụ erughị ala, mgbe ụfọdụ ntụpọ, nke na-agwọ onwe ya mgbe ụfọdụ ma ọ bụ mgbe ọgwụgwọ gasịrị, Otú ọ dị, ụdị abụọ ahụ. nke ntụpọ na akpụkpọ ahụ chọrọ nlebara anya pụrụ iche. Nke mbụ bụ ntụpọ ojii nke na-apụta n’ụdị urukurubụba n’akụkụ ọ bụla nke ihu n’ihi ọkụ, mbepụ, ọrịa ọ bụla ma ọ bụ afọ ime, anaemia siri ike ma ọ bụ mmetụta ọgwụ, ma ọ bụrụ na ahụrụ ha n’oge. A naghị eji ya ma na-agbaso ntuziaka dọkịta, mgbe ahụ ntụpọ ndị a na-apụ n’anya ma ọ bụ daa.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ntụpọ ọcha pụtara n’akụkụ ọ bụla nke ahụ dị ka ihu, olu, ubu, obi, azụ ma ọ bụ apata ụkwụ, ọ bụ ihe kpatara nchegbu, nke a na-ekwesịghị ileghara anya. A na-ekewa ntụpọ ọcha ndị a ụzọ anọ. Ụdị nke mbụ nwere obere ọcha, ndò na-acha aja aja, nke na-adịghị emerụ ahụ ma nwee ike ịgwọ ya. A na-akpata ha site na obere ero, nke na-ebute ntụpọ n’elu akpụkpọ ahụ. N’elu ntụpọ ndị a fụrụ akpụ nke nta ma na-enwekarị esemokwu na-apụ n’anya. Ebe ndị a na-apụtakarị n’oge okpomọkụ ma na-ada n’oge oyi. Mgbe ụfọdụ, a na-ahụ ha site na ọsụsọ dị ukwuu, mana ha na-adị ntakịrị ọkụ ma ha sachaa ahụ. Maka ndị nwere agba gbara ọchịchịrị, ntụpọ ọcha ndị a na-apụta na akpụkpọ ahụ site n’ebe dị anya, ma maka ndị nwere ọdịdị mara mma, ha na-acha pink.
Site n’ụzọ, ntụpọ ndị a adịghị akpata itching, ma n’ọnọdụ ụfọdụ a na-akọkwa itching. Ọ bụrụ na otu onye nọ n’ime ụlọ aghọọ onye ntụpọ ọcha ndị a, ndị ọzọ nwekwara ike imetụta. Ya mere, ọ ka mma ka onye ọrịa soro usoro nlezianya yana ọgwụgwọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, wepụta ihe ị na-eji dị ka akwa nhicha, akwa aka, uwe, wdg.
Ụdị nke abụọ na-agụnye gburugburu, ntụpọ ọcha na-apụta n’ihu ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ nwere elu siri ike. Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị ka a ga-asị na akpụkpọ ahụ akpọnwụwo ma ghọọ ọcha, ha anaghị afụ ụfụ. Echiche na-ezighi ezi banyere ntụpọ ọcha ndị a bụ na ọ bụ ụkọ calcium na-akpata ha, ma e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-akpata ntụpọ ndị a, nke kachasị mkpa bụ adịghị ahụ ike ụmụaka, ọ bụrụgodị na anwụ na-ekpuchi ha. ntụpọ ndị a na-emetụtakwa. Ọzọkwa, n’ọnọdụ ụfọdụ ikpuru afọ na-ebute ha. Ebe ndị a na-apụtakwa n’egedege ihu, ntì, agba na mgbe ụfọdụ n’olu, mana ha anaghị efe efe ma na-apụ n’anya n’onwe ha n’enweghị ọgwụgwọ.
Ụdị nke atọ gụnyere ekpenta, nke bụ ọrịa na-efe efe nke nje bacteria a na-akpọ M. ekpenta na-akpata. Ọrịa ahụ na-emetụtakarị akpụkpọ ahụ na irighiri akwara. O nwere usoro anọ. Na ọkwa nke mbụ, okirikiri ọcha na-apụta n’ahụ onye ọrịa, ọkachasị na ntì, ogwe aka, apata ụkwụ na n’úkwù. Nke a bụ ihe mgbaàmà dị oke mkpa nke ọrịa ahụ, ebe ọ bụ na ọrịa ahụ dị n’oge mbụ n’oge a, mgbe ahụ ọ bụrụ na a na-enye nchoputa na ọgwụgwọ ziri ezi ozugbo, mgbe ahụ enwere ike ịchịkwa ọrịa ahụ. N’ihe banyere igbu oge, ọrịa ahụ nwere ike gbasaa ngwa ngwa ma bụrụ nke a na-apụghị ịgwọta.
Ụdị nke anọ na-agụnye ọnya. Ọrịa a anaghị efe efe. Na mbụ, ntụpọ ọkara na-acha ọcha na-apụta n’akụkụ ọ bụla nke ahụ ma ọ bụrụ na ntutu dị n’etiti ntụpọ ndị a, ọ na-atụgharịkwa ọcha. Ọ bụrụ na ntụpọ ndị a dị n’isi, ntutu isi na-aghọ ọcha.
N’ọnọdụ ụfọdụ, ntụpọ ahụ na-adịgide otu afọ ruo ọtụtụ afọ, na ụfọdụ ndị mmadụ na-agbasa ngwa ngwa nke na ahụ dum na-ekpuchi ntụpọ ọcha. Ndị ọrịa nwere afọ ọsịsa enweghị ike ịnagide ike nke anyanwụ, na mgbakwunye na ha enweghị ahụ erughị ala na n’ozuzu ha na-adị mma.
E nwekwara ụfọdụ ntụpọ ọcha anyị na-akpọ òkù. Ọdịiche ndị a na-abụkarị n’ihi ịma mma ihu, dị ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ, ọ bụrụ na ha na-eji ude ịcha ọcha ugboro ugboro na-eme ka ahụ dị ọcha, n’ihi ya na-emetụta akpụkpọ anụ ahụ ha.
Ọzọkwa, ọ bụrụ n’ọrịa ahụ, itching na ọkụ nwere ike ime, n’otu aka ahụ, iji henna kemịkalụ nwekwara ike ịkpata mmerụ na akpụkpọ ahụ. Otú ọ dị, ma ntụpọ ndị ahụ dị oji ma ọ bụ na-acha ọcha, e kwesịghị ileghara ha anya, kama ịgwọ onwe gị, kpọtụrụ dọkịta na-ahụ maka akpụkpọ ahụ ozugbo wee nweta ọgwụgwọ zuru oke, gịnị kpatara ntụpọ ọcha ndị a na-apụta n’ahụ?
Ị hụla ndị nwere ntụpọ ọcha a na-ahụ anya na akpụkpọ ahụ ha, mana gịnị kpatara nke a ji eme na olee otu ọ ga-esi zere ya?
Ọrịa a ma ọ bụ ọrịa a na-emetụta ndị mmadụ nke ukwuu, nke dịkwa oke mkpa.
Ndị dọkịta ọkachamara, ndị ọkachamara, ndị dọkịta na-awa ahụ, ndị ndụmọdụ na Noor Health Life Institute. Dị ka ndị ọkachamara a niile si kwuo, Noor Health Life nwere ike inye gị ihe kacha mma. Na Noor Health Life na-agbakwa gị ọzọ ka ị na-akwado ndị ogbenye na-enyere ndị nọ n’ụlọ ọgwụ aka. daalụ niile. Ọ bụrụ na ị gụọ ọkwa ọ bụla nke Noor Health Life wee gụọ ya nke ọma. Gụkwuo.
A na-ekwenyekarị na ọrịa a, nke a na-akpọ bursa, bụ mmeghachi omume n’ịṅụ mmiri ara ehi mgbe o risịrị azụ, mana sayensị ahụike na-agọnahụ nke a.
N’ezie, ọ na-eme mgbe mkpụrụ ndụ ndị na-enye akpụkpọ ahụ agba ya kwụsịrị imepụta ụfọdụ pigmenti.
6 Ọrịa na-apụta na akpụkpọ ahụ
Dị ka Noor Health Life si kwuo, ọrịa a na-apụtakarị n’ụdị obere scars ma ọ bụ ntụpọ ọcha.
Ihe dị ka nde mmadụ 70 n’ụwa niile ebutela ọrịa a, nke a makwaara dị ka ọrịa autoimmune, n’ihi na mgbe ekpughere ya, usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-awakpo mkpụrụ ndụ ndị na-arụ ọrụ iji weghachi agba ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ejidere ya na mmalite, ya bụ, mgbe ntụpọ adịghị apụta na akpụkpọ ahụ, ma agba ahụ dị ọkụ, mgbe ahụ, akpụkpọ ahụ ga-enwe ike iweghachi ya na mbụ ya.
Iji AC na-akpata ọrịa anụ ahụ: nyocha
Site n’ụzọ, na ọgwụgwọ ọrịa a, ebumnuche ndị ọkachamara nwere n’ihu ha bụ iweghachi agba ngwa ngwa ma nọgide na-enwe mmetụta ya.
Maka nke a, a na-eji ụfọdụ ude steroid achịkwa mbufụt ebe Oion Mint nwekwara ike ịba uru.
N’ọnọdụ ụfọdụ, ọgwụgwọ ahụ na-eme ka agba nke akpụkpọ ahụ na-adịghị emetụta na-eme ka ntụpọ ọcha pụta ìhè.
Ọzọkwa ọgwụgwọ ọkụ na ịwa ahụ bụ nhọrọ. Maka ajụjụ na azịza ndị ọzọ ị nwere ike nweta Noor Health Life site na email wee kpọtụrụ anyị na WhatsApp. noormedlife@gmail.com